April 2015 | မာယာဖြူ
မွေးနေ့ဆိုတာ တနည်းအားဖြင့် အတိတ်ဘ၀ရဲ့ကံအကျိုးပေးကြောင့် ဒီခန္ဓာရလာခဲ့တဲ့နေ့ပါ...
နေခဲ့တဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် ဘ၀အတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရင်း ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို ကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေခဲ့ချိန် အကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေခဲ့ချိန် ဘယ်စိတ်နဲ့နေခဲ့ချိန်ပိုများခဲ့သလဲဆိုတာကို တခြားနေ့တွေမှာ မတွေးရင်တောင်မှ ကိုယ့်မွေးနေ့ရောက်လာရင်တော့ ပြန်ဆင်ခြင်တွေးတောကြည့်ရင်း ရိုးရိုးသားသားအဖြေထုတ်ကြည့်ပါ...
အဲ့ဒီလို ပြန်တွေးလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်ဘယ်စိတ်နဲ့အများဆုံးနေထိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့မနက်ဖြန်ခရီးက ကံအကျိုးပေးလမ်းကြမ်းလား လမ်းကောင်းလား ဆိုတာဆင်ခြင်မိလာမှာပါ...
တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ကိုယ့်မွေးနေ့ရောက်တိုင်း ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်သုံးသပ်ရင်း ကိုယ့်ကိုမွေးဖွားသန့်စင်ပြီး ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ အမိအဘရဲ့ကြီးမားလှတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုလည်း အထူးပြုဆင်ခြင်ပြီး ဘ၀ခရီးဆက်နိုင်ပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့
MAY GOD BLESS YOU & MAY ALL YOUR DREAMS COME TRUE
ကောင်မလေးကကောင်လေးကို ``ကျမကိုချစ်လား´´ လို့ ခဏခဏမေးခဲ့တယ်… မေးတိုင်းလည်း ကောင်လေးက ``ချစ်တာပေါ့´´ လို့ အမြဲဖြေခဲ့တယ်.. ကောင်လေးရဲ့အဖြေရပြီးတဲ့အခါတိုင်းလည်း ကောင်မလေးက ``အသက်တွေကြီးတဲ့အထိအနားမှာအတူရှိနေမှာလား´´ လုိ့ထပ်မေးခဲ့တယ်… ကောင်လေးကလည်း ``ရှိနေပေးမှာပေါ့´´ လို့ အမြဲဖြေခဲ့တယ်.. တစ်နေ့ကျတော့ အဲ့ဒီလိုခဏခဏမေးတတ်တဲ့ကောင်မလေးကို ကောင်လေးကလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့တယ်…. အဘိုးကြီးအဘွားကြီးစုံတွဲအရုပ်လေးပေါ့.. အဲဒီအရုပ်လေးနဲ့အတူ ``ဒီအရုပ်လေးက ချစ်ခဏခဏမေးတတ်တဲ့မေးခွန်းအတွက်ကို့ရဲ့အဖြေပဲ တစ်သက်လုံးအတွက်ပေါ့´´ ဆိုတဲ့ ကတိတစ်ခုလည်းပေးခဲ့တယ်...
ဒီလိုနဲ့ နှစ်အချို့ကြာလာပြီးတဲ့တစ်နေ့မှာ အဝေးပြေးဘက်စ်ကားကြီးတစ်စီးပေါ် ခရီးသည်အဖြစ်လိုက်ပါလာတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်….
ကောင်မလေးကကောင်လေးကိုတိုးတိုးလေးကပ်ပြောလိုက်တယ် ``ကို ဟိုဘက်ဘေးခုံကအဘိုးကြီးကိုလှည့်ကြည့်လိုက် မသိမသာလေးကြည့်နော်´´ တဲ့.. ကောင်လေးကလည်း ကောင်မလေးပြောတဲ့အတိုင်း လျှောက်လမ်းတစ်ဘက်ရဲ့ဘေးခုံမှာထိုင်နေတဲ့ ဆံပင်တွေတစ်ခေါင်းလုံးဖြူဖွေးနေတဲ့အဘိုးကြီးကို ငဲ့ကြည့်လိုက်ရင်း ``ဘာဖြစ်လုိ့လဲ´´ လို့မေးလိုက်တယ်… ကောင်မလေးက ကောင်လေးကိုကြည့်ပြီးမေးလိုက်တယ် ``အဲ့ဒီအဘိုးကြီးအရွယ်ရောက်တဲ့အထိအနားမှာအတူတူရှိနေပေးမှာလား´´ တဲ့.. အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကောင်မလေးကိုသေချာကြည့်ပြီးကောင်လေးကပြန်ဖြေလိုက်တယ်
တချို့တွေအတွက်တော့ “အပျော်ဆုံးနေ့လေး” တဲ့ ...
တစ်ချက်တစ်ချက် ခက်ခဲနေပြန်တယ် ...
ဒီနေရာပဲ ပြန်ပြန်ရောက်နေတယ် ...
အားလုံးဆုံးရှုံးသွားလို့ ထိရှခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာလား ...
နေ၀င်ချိန်ကိုက စောလွန်းခဲ့တာ ...